CatDV MAM တွင်သိုလှောင်ထားသောဗွီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှု ၂၀၀,၀၀၀ ၏ Edmonton ရဲတပ်ဖွဲ့သည်သမိုင်းမှတ်တိုင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 200,000 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Edmonton ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု CatDV ပေးခဲ့သည်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ 200,000 ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုများ၏မှတ်တိုင်ရောက်ရှိ
Warwick, ဗြိတိန် - မေလ 31, 2018 ၏ Archives: - Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များယနေ့ Edmonton, အယ်လ်ဘာတာ, ကနေဒါ, မြို့အဘို့စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ CatDV မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) စနစ်၏က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ချက်မှတ်တိုင်လွန်ပြီဟာ Edmonton ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု (EPS) ကကြေညာခဲ့သည် 200,000 ဗီဒီယိုကပိုင်ဆိုင်မှုထက်ပို။ CatDV ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရှာဖွေမှု, အလိုအလျောက်နှင့်သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်မှတဆင့် EPS ကုန်ကျ-ထိရောက်စွာနိုင်ပါတယ်အဝေးရောက်, သင်တန်းပေးခြင်းများနှင့်ပြည်တွင်းရေးဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အကြောင်းအရာက၎င်း၏ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာစာကြည့်တိုက်ကိုဝင်ရောက်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ။
EPS မြို့တော်ကိုတလျှောက်လုံး 1,800 ဘူတာထဲက operating နီးပါး 700 ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအရာရှိများနှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 15 အရပ်သားဝန်ထမ်းများန်ထမ်း။ ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားလုပ်သားအင်အားနှင့်အတူထိရောက်သောသင်တန်းနှင့်ကိုက်ညီဆက်သွယ်ရေးသည် EPS ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာယူနစ်များအတွက်ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအဖွဲ့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတွင်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများစွာကို terabytes ထုတ်လုပ်ဌာန၏ရဲ့ website နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပြင်, အရာများ၏အများစုအရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်သင်တန်းအဘို့အပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအသုံးပြုသည်။
"ကျနော်တို့အဓိကအား output ကိုမြင့်မား volumes ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်အနည်းဆုံးသင်္ဘောသားတစ်ဦးကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုယူနစ်, နေကြတယ်" ဟုဘော့ Allman, သည် EPS ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအဖွဲ့နှင့်အတူကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူကပြောသည်။ "ကျနော်တို့မှရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ HD ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာနီးပါးခုနစ်နှစ်အကြာကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲ, ကျွန်တော်တို့ကိုစတိုးဆိုင်ကိုကူညီနိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကြည့်ရှု, ငါတို့ကဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။ ဒါဟာစနစ်စကေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထောက်ပံ့ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Square ကိုထောင့်ကွက် Systems မှ CatDV ကို ရွေးချယ်. , ထိုသို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်လျက်ရှိသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ "
EPS ချောမွေ့နှင့်စပ်ရာမရှိသောစားသုံးမိ, အမျိုးအစား and Tagging များအတွက် CatDV အသုံးပြု. လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်သိမ်းဆည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများအဓိကအားပြည်တွင်းရေးသင်တန်းဗီဒီယိုများမှာဒါပေမယ့်လည်းအများပြည်သူအဝေးရောက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်နေဆဲဓာတ်ပုံများ၏ကြီးမားသော volume အတှကျကဗီဒီယိုပါဝင်သည်။ ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်တစျခုခုတို့ကိုမျိုချမိကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အ CatDV အလုပ်သမား Node သင့်လျော်သောဖိုင်တွဲရန်အကလစ်ကယ်တင်နှင့် EPS ဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုမော်ကွန်းတင်မှကြိုတင်သတ်မှတ်ထား Workflows ကိုအသုံးပြုသည် nearline နှင့်အော့ဖ်လိုင်းသိုလှောင်မှုမှတစ်ပြိုင်နက် Backup တွေကိုအတူသိုလှောင်မှုစနစ်အမျှဝေပေးတယ်။ ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုအဘို့, အလုပ်သမား Node အလိုအလျောက် proxy ကိုထက် Full-resolution ကိုဖိုင်မျှဝေခြင်းကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် system ကိုအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, အသုံးပြုသူလက်လှမ်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်အနိမ့်-resolution ကို proxy ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ CatDV နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပိုပြီးထိရောက်ညာဘက်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. သဘောပေါက်ပေမယ့်ယခုကျွန်တော် 4K နှင့်အလွန်ကြီးမားဖိုင်တွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ဖွင့်ကြောင်းအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောရဲ့" Allman ကဆက်ပြောသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်များကဖိုင်တစ်ဖိုင် ingesting စတင်ထို့နောက်ညနေပိုင်းတွင်နေရာဖြစ်သည် သွား. , သူတို့ကလာမယ့်နံနက်ယံ၌လာသောအခါ, ထို့နောက်အလုပ်သမား Node ကတက်ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်မီဒီယာရေကူးကန်ထဲမှာ ထား. , CatDV အတွက်ပြုစုဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ပါတယ်"
CatDV ရဲ့စိတ်ကြိုက် interface ကို၎င်း၏လိုအပ်ချက်ပြောင်းလဲပါပြီအဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအဖွဲ့ကနှစ်ပေါင်းများစွာစနစ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကြီးထွားလာခြင်းနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပြောင်းလဲပစ်သကဲ့သို့, အဖွဲ့ကပင်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတည်ရှိမအံ့သောငှါအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများအလံတင်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။ CatDV ရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်အဖွဲ့ရဲ့ Workflows မှစနစ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အလွန်လွယ်ကူစေသည်။
"သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်အတူ CatDV ၏ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုသည် EPS ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေအမြဲတမ်းနေထိုင်ရာအကြောင်းကိုနှင့်အစဉ်မပြတ် CatDV interface ကိုစွန့်ခွာရန်မလိုဘဲစိတ်မပူပါနဲ့ရန်မလိုဘဲ, သူတို့ကလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာရှာတှေ့နိုငျဆိုလိုသည်," Dave Clack, CEO ဖြစ်သူကလည်း, စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များ။ "Plus အား, အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအကြောင်းအရာနှင့်စကေး၏ကြီးမားသော volumes ကိုကိုင်တွယ်ရန် CatDV ရဲ့စွမ်းရည်ကို EPS ၎င်း၏ metadata ကို-ကိုင်တွယ်စွမ်းရည်အားဖြင့် enabled အားလုံးမှအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ EPS မကြာသေးမီကယင်း၏ 125th နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပတဲ့အခါ, CatDV အဖွဲ့ access ကိုသမိုင်းဝင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများကူညီပေးနေအားဖြင့်အခမ်းအနားများတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ 150th အခမ်းအနားန်းကျင်ကြွလာသောအခါသူတို့နေဆဲ CatDV သုံးပြီးပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်နေကြသည်! "
ရင်ပြင်ထောင့်ကွက်စနစ်များနှင့် CatDV အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.squarebox.com.
စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက်အထူးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင် software ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2001 အတွက်ဖြန့်ချိသည်၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် CatDV လျှောက်လွှာ, ကလွယ်ကူသည့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု repurpose နှင့်ငွေရှာခြင်းအဘို့အအောင်နေဖြင့်မီဒီယာဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပရမ်းပတာရန်အလို့ငှာတတ်၏။ မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာရောင်းချသူတစ်ဦးအလုံးအရင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအစွမ်းထက်, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ toolset နှင့််ပေါင်းစပ်ရာပူဇော်သက္ကာကို, အ CatDV software ကိုMac®နှင့်Windows®ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသန်းပေါင်းများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲ multiuser စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်မှသေးငယ်တဲ့ workgroups ထံမှခဲ့သည်ဆို၏နိုင်ပါသည်။ 2012 မှာတော့ Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ HM ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ကအပ်နှင်း, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ဂုဏ်သတင်းဘုရင်မကြီးရဲ့ Award ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ CatDV လည်းအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု Tool ကိုနှင့်ဗီဒီယိုမဂ္ဂဇင်းရဲ့အကောင်းဆုံး NAB Vidy ဆုကို၏အဘို့ကို Creative နွားရဲ့အပြာရောင်ဖဲကြိုးအပါအဝင်ဆုများစွာနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်, Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များလုပ်ငန်းအသွားအလာပုံစံဒီဇိုင်းဒေသခံတပ်ဆင်ခြင်း, အကြံပေးများနှင့်ထောက်ခံမှုပေးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ၏ကွန်ယက်မှတဆင့်တကမ္ဘာလုံး CatDV ရောင်းချပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.squarebox.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/SquareBox/180531SquareBox.docx
ဓါတ်ပုံများဖို့ Link ကို: www.wallstcom.com/SquareBox/SquareBox-Edmonton-Police-Photos.zip
ဓါတ်ပုံများ၏ဖော်ပြချက်: Edmonton ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက် CatDV ပေးခဲ့သည်စနစ်၏က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ချက်မှတ်တိုင်လွန်ပြီ: 200,000 ဗီဒီယိုကပိုင်ဆိုင်မှုထက်ပို၏သိမ်းဆည်း။
CatDV ပေါင်းစည်းမှု ပေးခဲ့သည် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု မီဒီယာအကြောင်းအရာငွေရှာခြင်းအတွက် ထုတ်လုပ်မှု Workflows SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များ က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-05-31
ယခင်: Cine ဂီယာကုန်စည်ပြပွဲမီးမောင်းထိုးပြထားသည်ထောင်စုနှစ် DXL2 ဂေဟစနစ်၏ဆက်လက်ချဲ့မှာ Panavision
နောက်တစ်ခု: PANASONIC IMT VISLINK ကြိုးမဲ့ဝင်